Fanirisoa Ernaivo : Ho voaroaka tsy ho mpitsara? -
AccueilSongandinaFanirisoa Ernaivo : Ho voaroaka tsy ho mpitsara?
Fanirisoa Ernaivo : Ho voaroaka tsy ho mpitsara?
03/11/2018 admintriatra Songandina 0
Manoloana ny vava nataon’ny mpitsara sady kandidà amin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena, Fanirisoa Ernaivo, amin’ny fihantsiana ny mpitandro filaminana, dia namoaka fanapahana ny minisitry ny Fitsarana, Harimisa Noro Vololona, amin’ny fampiatoana ity mpitsara amin’ny asany amin’ny maha mpitsara azy. amin’ny asany vonjimaika io, izay maharitra enim-bolana hatramin’ny namoahan’ny minisitry ny Fitsarana ilay fanapahana, ny alarobia 1 novambra teo.
Nambaran’ny minisitra Harimisa Noro Vololona fa miendrika fandikan-dalàna ny fampirisihan’ity mpitsara sady kandidà amin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena iray ity amin’ny herisetra sy fanakorontanana. Raha ny voalaza hatrany, fihantsiana mpitandro filaminana ireny nataon-dRamatoa Fanirisoa Ernaivo ireny, ary fandikana tanteraka ny lalànan’ny etika sy deontôlôjian’ny mpitsara izany. Notsindrian’ity minisitry ny Fitsarana ity hatrany fa fihoaram-pefy ny fihetsika sy fiteny tahaka ireny, ary tsy azo ekena velively ka nahatonga ny fanapahana amin’ny fampiatoana azy vonjimaika amin’ny asany mandritra ny enim-bolana.
Nanazava ny minisitra fa tao anatin’ny lalàna tanteraka no nandraisana ny fanapahan-kevitra ary nodinihina niaraka tamin’ireo filohan’ireo rafi-pitsarana, toa ny filoha voalohan’ny Fitsarana fampakarana, mpampanoa lalàna ny Fitsarana fampakarana, sns.
Ankoatra izay, notsindrian’ny minisitra fa aorian’ny fampiatoana vonjimaika an’i Fanirisoa Ernaivo mandritra ny enim-bolana, hiakatra filankevi-pifehezana amin’ny filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) ny tenany. Noho izany, hoy ity laharana voalohany ao amin’ny minisiteran’ny Fitsarana ity, ny filankevi-pifehezana no tompon’ny teny farany amin’ny sazy ho azon’ity mpitsara nandika lalàna ity.
Raha izay, mety ho voaroaka amin’ny asany amin’ny maha mpitsara azy ny kandidà Fanirisoa Ernaivo. Maro tokoa mantsy no tohina tamin’ireny fanehoan-kevitra fihantsiana mpitandro filaminana sy fampirisihana amin’ny herisetra nataon-dramatoa Fanirisoa Ernaivo ireny, ka nampiteraka resa-be teto amin’ny firenena izany… Noho izany indrindra, ny filankevi-pifehezana eo anivon’ny CSM no tompon’ny fanapahana farany mahakasika iny fandikan-dalàna nataona mpitsara iray iny.
Vadintany Clovis R. : NAMETRAKA FITORIANA ROA SOSONA
Hery Rajaonarimampianina : « Aoka ny zavatra vita no hitarafana ny ho avy »